Archive du 20171103
PM Solonandrasana Hoesorina koa amin’ny desambra ?
Loharanom-baovao iray akaiky ny fitondrana no nahenoana fa akaiky ihany koa ny fanaisorana ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier eo amin’ny toerany, taorian’ny efa nandakan’ny HVM ny filohan’ny antenimierandoholona teo aloha Honoré Rakotomanana.
Fiatrehana ny fifidianana Mifandamina ny mpanao politika
Samy mametraka ahiahy sy tsy mahatoky ny lalàna mifehy ny fifidianana ireo vondrona politika maro, izay nampitovy tadin-dokanga sy nanao fanambarana niraisana ny herinandro teo, ary nitohy teny amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina omaly.
Rivo Rakotovao Hatao amin’ny 2018 ny fifidianana filoham-pirenena
Ity ve izany ilay planina faharoa rehefa hita ho tsy tena tafavoaka ilay voalohany dia ny fikasana hikitika ny andininy faha-46 sy 47 ary 48 mikasika ny fetr’andro fametraham-pialan’ny filoham-pirenena mialoha ny hanambarany ny filatsahan-kofidiany ?
Riribe – Fedep “Hisy ady an-trano eto raha tsy vita ny fampihavanana”
Efa tokony hatomboka amin’izay ny tena asa atao amin’ny fampihavanam-pirenena, hoy i Riribe filohan’ny Fedep fa ho korontana sy ady an-trano mahatsiravina no hiseho eto Madagasikara raha tsy hatao alohan’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena manaraka.
Filohampirenena sy Praiminisitra Samy tsy teto Madagasikara
Nandao an’i Madagasikara ny alatsinainy 30 oktobra mba hiatrika ny fivoriana faha 39 n’ny Unesco any Paris ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier ; tanterahana ny 31 oktobra ka hatramin’ny omaly 02 novambra io fivoriana io ary volazan’ny fampitam-baovaon’ny Primatiora eny Mahazoarivo fa misolotena ny filoham-pirenena ny praiminisitra
Fampihavanam-pirenena Tokony hialoha ny fifidianana, hoy ny RDS
Tsy mety ny hangina manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Roso ho an’ny Demokrasia Sosialy (RDS), tarihin’ny filohany, Andrianirina Fetison Rakoto.
Mba sokiro ny tain-tsofina e !
Aiza ianareo ry Jean fa mba efa miantso sy miala nenina aminareo anie ny besinimaro e ! Tsy mbola hisikotra ny tain-tsofinareo ihany ve ianareo ka hanao be marenina hatrany ?
Fasan-drazan’ny mpanolotsain’ny praiminisitra Misy mivarotra sy mampanofa
Hatairana sy hagagana ny an’ny fianakaviana raha naheno antso ny alarobia teo fa nisy nandoro ny fasan’izy ireo.
Gidragidran’ny oniversiten’i Mahajanga Mpianatra 50 mahery hiakatra « CODIS »
Hiakatra filankevitry ny fitsipi-pifehezana na CODIS ny 8,9,10 novambra ho avy izao ireo mpianatra maherin’ny 50 voasaringotra noho ny resaka korontana sy famotehan-javatra tao amin’ny oniversiten’i Mahajanga, araka ny valandresaka nataon’ny mpitantana ny oniversite tamin’ny mpanao gazety omaly.
Fanotofana tany ataon’ny Karana Ahiana ho dibo-drano i Mahajanga
Velaran-tany an’hekitarany maro misy ala honko ao Manapatanana Mahajanga no efa voafefy satria voalaza fa lasan’ny karana, ary efa miroso amin’ny fanotofana ireo mitonona ho tompony. Mampiasa fitaovana raitra mihitsy ireo karana mpanam-bola.
Fitaka bevava tany Ifanadiana Manome herinandro ny depiote ny zanak’Antanala
Fitaka avo lenta nataona depiote voafidy tany an-toerana no nahazo ny zanak’Antanala any amin’ny kaominina Ifanadiana. Nanao tolotr’asa hiantsoana olona hametraka “pylône”
CNaPS Sport Hiara-kiasa amin’ny Nino Design International
Tontoso tamin’ity herinandro ity ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Nino Design International sy ny ekipan’ny CNaPS Sport, raha efa am-bolana maro no efa nisalotra ny akanjo Nino Design izy ireo.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Razanadrakoto Soloniaina Jean de Dieu « Porte-Fanion » an’i Madagasikara tany Beijing
Mbola maro ireo kintan’ny fanatanjahantena Malagasy nisalotra ny anaram-boninahitra tompondaka eran-tany tamin’ny taranja samihafa izay mbola hoentintsika eto amin’ity pejy ity amin’ny fotoana hahazoana azy ireo fa anio aloha dia ny Malagasy
Edito Vola, vola, vola
Mba fantatr’ireo mpitondra tokoa ve ny hasin’ny zava-dazainy raha miventy mandrakariva hoe ho an’ny tombontsoam-bahoaka izy ireo ?
Pesta, fomban-drazana, fandevenana Nanaovana atrikasa manokana
Fandevenana mendrika ary azo antoka no nifantohan’ny famelabelaran-kevitra sy fifanakalozana tetsy amin’ny hotely Carlton Anosy omaly niarahan’ny minisiteran’ny fahasalamana, ny OMS ary ireo olobe,
Ady amin’ny pesta Nitondra ny anjara birikiny ny BNI
Manoloana ny firongatry ny aretina pesta eto amintsika dia tsy nitazam-potsiny ny banky BNI amin’ny maha mpiara-miombon’antoka azy ireo amin’ny fanatsarana ny asa sosialy eny anivon’ny fiaraha-miasa.
Hopitalin’ny reny sy ny zaza Tsaralalana Nahazo fitaovana hikarakarana ireo zaza sempotra
Nahazo “nébulisateur” folo avy amin’ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Anosy tarihin’ny filohany Voninahinjaka Andry, ny hopitalin’ny reny sy ny zaza etsy Tsaralalana, omaly.
Fampianarana sy fampandrosoana maharitra Manampy betsaka ny UNESCO, hoy ny praiminisitra
Nitsidika ny masoivoho Malagasy, ny tranom-panjakana ao L’hay les roses, ary ny tranon’ny mpianatra Malagasy ao Cachan ao Paris ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier ny 1 novambra 2017.
Fifanolanan-tany any Morarano Faharetana Mitady hivadika ho Soamahamanina faha-3
Tsy mety mifarana ny fifanolanan-tany misy eo amin’ny fokonolona any Faharetana-Imerintsiatosika-Arivonimamo sy ny tambatra orinasa vahiny Bionex izay nanomboka tany amin’ny taona 2010 nahatongavan’ity farany tany an-toerana.
Famonoana ny ben’ny tanànan’Ampefy Maty voatifitra ilay atidoha nikotrika
Nitombo roa indray ny jiolahy tsy afa-mamerina asa ratsy intsony raha telo hafa no azon’ny zandarimariam-pirenena sambo-belona.
Fanambazana 3 tapitrisa ariary ny zandary Kolikoly no saika hatao, fisamborana no niandry
Toerana efa tena anjakan’ny asan-dahalo ny any amin’ny faritra Alaotra Mangoro ankehitriny.
Antsirabe Efa miakatra an-tanàn-dehibe ny dahalo
Tsy an-tsaha tsy an-tanàn-dehibe intsony ny asan-dahalo fa efa manafika ny renivohitra mihitsy.